News Plus Views: February 2015
किन गाँजा खान्छन् नागा बाबा?
डा. जगमान गुरुङ, संस्कृतिविद्
के हो महाशिवरात्रि ?
शिवरात्रि वर्षमा १२ पटक आउँछ । महाशिवरात्रिचाहिँ एकपटक मात्र आउँछ । प्रत्येक महिनाको कृष्णापक्षको चतुर्दशीको मध्यरातलाई शिवरात्रि भनिन्छ । महाशिवरात्रिचाहिँ फागुन कृष्णपक्षको मध्यराति पर्छ । करिब तीन सय वर्षअघि माघ कृष्णपक्षको मध्यरातलाई महाशिवरात्रिका रूपमा मनाइन्थ्यो ।
महाशिवरात्रि मनाउन कहिलेदेखि सुरु भयो र यसको अवसरमा नागा बाबा कहिलेदेखि भारतबाट आउन थाले भन्ने यकिन जानकारी कतै उपलब्ध छैन । पूर्वमध्यकालमा काशीको आमरदक पीठका शंकराचार्य दुईपटक नेपाल आएका थिए । शिवजस्तै उनी पनि तान्त्रिक थिए । साँढेमाथि सवार हुन्थे । नेपालमा उनले चेलाचपेटा पनि बनाएका थिए । यसको अर्थ त्यतिवेला पनि भारतबाट शैव मतका बाबा नेपाल आउने गर्थे भन्ने हो ।
मल्लकालका अन्तिम राजा जयप्रकाश मल्लका बुबा जगतजय मल्लका पालादेखि पशुपतिनाथको मन्दिरमा दक्षिण भारत, महाराष्ट्रका भट्ट ब्राह्मणलाई पुजारी बनाउने चलन सुरु भएको हो । यसको मतलब त्योभन्दा अगाडिदेखि नै शिवलाई आराध्यदेव मान्नेहरू पशुपति आउने गर्थे । त्योभन्दा अगाडि लिच्छवीकालमा धातुको माला लगाउने पाशुपताचार्य नेपालमा भएको उल्लेख छ । यस्ता पाशुपताचार्य भारतका पनि हुन्थे ।
बाबाहरू पशुपतिमा किन आउँछन् ?
भारत वर्षमा १२ प्रमुख शिवलिंग छन् । हिमालय शृंखलामा भएको एक मात्र शिवलिंग केदारनाथ हो । पशुपतिनाथलाई केदारनाथको शिर मानिन्छ । त्यही भएर शैव मत राख्नेमाझ पशुपतिनाथको गरिमा उच्च छ ।
महाशिवरात्रि खासगरी पशुपतिनाथको पर्व हो । हिमवत्खण्डमा पर्ने पशुपतिनाथको महिमा र महत्त्व शैव मतमा उच्च भएकाले महाशिवरात्रिमा शिवको सान्निध्यमा रहन भारतभरिबाट नागा बाबा आउने गर्छन् ।
कसरी आउँथे बाबाहरू ?
राणाशासन अन्त्य नभएसम्म नेपालका अन्य भूभागबाट काठमाडौं आउनेले पासपोर्ट बोक्नुपथ्र्यो । विदेशबाट आउनेले त अझ अनिवार्य रूपमा बोक्नैपथ्र्यो । तर, कपडासम्म त्यागेका दिगम्बर शिवका भक्त नागा बाबालाई भने यस्तो नियमबाट उन्मुक्ति दिइन्थ्यो ।
महाशिवरात्रिको छेको पारेर उनीहरूलाई काठमाडौं छिर्न दिइन्थ्यो । भिन्ना–भिन्नै सम्प्रदायका बाबाका लागि छुट्याइएको अखडामा उनीहरूलाई बस्न दिइन्थ्यो । यहाँ बसुन्जेल उनीहरूलाई चाहिनेजति दाउरा, खाना, पानी, खरानी आदिको बन्दोबस्त गरिन्थ्यो । राम्रोसँग सबैको मेजमानी गरिन्थ्यो । अहिलेजस्तै त्यतिवेला पनि सरकारले बाबाहरूलाई गाँजा, भाङ, चरेस दिने गथ्र्यो ।
महाशिवरात्रि सकिएपछि फर्किने वेलामा बाटो खर्च दिइन्थ्यो । कसै–कसैलाई बाघ र मिर्गका छालासम्म दिएर बिदाइ गरिन्थ्यो । बिदाइ गरेपछि पनि जान नखोज्नेलाई सिपाही लगाएर थानकोट कटाइन्थ्यो ।
Posted by Sujit Mainali at 10:45 PM No comments: Links to this post
किन मुछिदैछ एमाओवादी फ्रि–टिबेट मुद्धामा ?
पहिलो संविधानसभामा एमाओवादीले सोलुबाट समानुपातिकमा भित्र्याएको सभासद दलाई लामाको योद्धा भएको भन्दै चिनियाँ दुतावासले औपचारिक रूपमै आपत्ति जनायो ।
कुटनीतिक मर्यादा नाघ्नु नपरोस् भनेर दुतावासले गोरखापत्रको शेर्पा भाषामा निस्किने परिशिष्टांकमा ती सभासद्ले लेखेको लेखलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने आधार बनाएको थियो ।
त्यसपछि एमाओवादीको भरथेगमा बनेको झलनाथ सरकारमा ल्हारक्याल लामा अर्थराज्यमन्त्री बने । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित धर्मशाला (प्रवासमा रहेको तिब्बत सरकार)मा उनको आवतजावत बाक्लो रहेको समाचार त्यतिबेला नेपालका ठूला मिडियाले लेखेका थिए ।
अहिले आएर एमाओवादीले तिनै ल्हारक्याललाई सभासदमा मनोनित गर्यो । फ्रि टिबेटको मुद्धामा एकयबद्धता जनाउनेहरूसँग एमाओवादीको साँठगाँठले बेलाबेलामा मिडिया तताउने गर्छ ।
आखिरमा यस्तो किन हुने गर्छ ?
यो सब बुझ्न इतिहास थोरै केलाउनुपर्ने हुन्छ । सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले चीनसँग मित्रताको हात बढाए । किनकी भारतसँग सोभियत संघले मैत्री सन्धी गरेपछि अमेरिकालाई सोभियत–भारत गठबन्धनविरुद्ध उभिन एसियामा दरिलो साझेदार आवश्यक परेको थियो । ठिक त्यतिबेलै चीन र सोभियत संघबीचको तित्तता उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
सोभियत संघसँग एसियामा लड्न शक्ति सञ्चय गर्ने तत्कालको स्वार्थ पुरा गर्न अमेरिकाले ‘दिर्घकालिन नीति’लाई त्यतिबेला विश्राम दियो । त्यति नै बेला अमेरिकाको गुप्तचर निकाय सेन्ट्रल इन्टिलिजेन्स एजेन्सी (सिआइए)ले कोलोराडोमा लगेर सैन्य तालिम दिइ अत्याधुनिक हतियारसहित नेपाल छिराएका खम्पा विद्रोहीहरूले मुस्ताङलाई ‘लञ्चिङ प्याड’ बनाएर चीनभित्र शशष्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरिरहेका थिए ।
चीनसँग मित्रताको हात बढाएपछि अमेरिकाले खम्पाहरूलाई सहयोग गर्न छाड्यो । अमेरिकाबाट यस्तो ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि नेपालले खम्पा विद्रोहीहरूलाई पक्राउ गरी विद्रोह शमन गरिदियो । चीनलाई त्राण मिल्यो ।
अहिले विश्व शक्तिसमिकरण बदलिएको छ । सोभियत संघको पतनपछि भारतलाई अमेरिकाले रणनीतिक साझेदार बनाएको छ । एसियाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा भारत–अमेरिका सझेदारी स्पष्ट रूपमा चीन र पाकिस्तान (इस्लाम)विरुद्ध लक्षित छ ।
यस्तो अवस्थामा निक्सनको पालामा थाती राखेको चीनसम्बन्धी दिर्घकालिन नीति ब्युताउन अमेरिकालाई कुनै बाधा छैन । अझ भनौं, अमेरिकाले यस्तो नीति ब्युताइसकेको छ ।
यस्तो नीतिको नियत र लक्ष समान भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउने पात्र भने फेरिएका छन् । खम्पाहरूको कायाकल्प भएको छ, यो हिमाली मुलुकमा ।
खम्पा विद्रोहीको नयाँ संस्करण को हो भन्ने बुझ्न टाउको दुखाइरहन आवश्यक छैन । किनकी सिआइएका पूर्वअधिकारी जोन केनेथले तिब्बत मुद्धामार्फत चीनलाई धुजाधुजा गराउने पात्रको पहिचान उहिल्यै गरिदिएर हामीलाई सहज बनाइदिएका छन् ।
सन् १९९९ मा प्रकाशित आफ्नो किताब ‘अर्फन अफ कोल्ड वार’मा उनले एसियाको यो चिसो हिमाली क्षेत्रमा आगो सल्काउन जातीय मुद्धालाई ‘प्रभोक’ गरिदिए पुग्ने ‘फर्मुला’बारे उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैले, जातीय मुद्धालाई यहाँ जसले ‘प्रभोक’ गर्दैछ, ऊ नै खम्पाको नयाँ संस्करण हो । वर्गको राजनीति गर्नुपर्ने आदर्श बोकेको एमाओवादीले जातीय मुद्धा बोक्नु र उसैले तिब्बतसँग नाम जोडिएका पात्रलाई एकपछि अर्को गरी संविधानसभामा भित्र्याउनुले सिआइए फर्मुलाको प्रयोगबारे यथेष्ट प्रकाश पार्दैन र ?
खम्पा विद्रोहीलाई सघाउन त्यतिबेला भारतको इन्टिलिजेन्स ब्युरो (आइबी)ले सिआइएलाई मद्दत गरेको कुरा ‘सिआइएज् सिक्रेट वार इन टिबेट’ किताबमा स्पष्टसँग लेखिएको छ । यस्तोमा खम्पा विद्रोहीको नयाँ संस्करण (जातीवादीहरू)लाई अहिले आएर भारतको टेकोमा फस्टाएको मधेसी दलहरूले समर्थन गरिरहेको तथ्यले इतिहास पुनः दोहोरिएको प्रष्ट पार्दैन र ? (भारतले मधेसी दलहरूलाई स्थापित गराउन केकसो ग¥यो भन्ने कुराको फेहरिस्त जान्न हेर्नुस्, सुधिर शर्माको ‘प्रयोगशाला’) ।
अर्थात, निक्सनको चीन भ्रमणअघि तिब्बत मामिलामार्फत चीनविरुद्ध बनेको अमेरिका–भारत गठबन्धन अहिले पुनः ब्युतेर ‘एक्सन’मा उत्रिएको छ । यस्तो डरलाग्दो नीति कार्यान्वयनको ‘फ्रन्टरनर’ त्यो हो जसले तिब्बतसँग जोडिएका नेपाली भूभागमा जातीयतामा आधारित संघीयता हुनैपर्छ भन्छ ।
सुजित मैनाली , पहिलो संविधानसभामा एमाओवादीले सोलुबाट समानुपातिकमा भित्र्याएको सभासद दलाई लामाको योद्धा भएको भन्दै चिनियाँ दुतावासले औपचारिक रूपमै आपत्ति जनायो ।
खम्पा विद्रोहीको नयाँ संस्करण को हो भन्ने बुझ्न दुखाइरहन आवश्यक छैन । किनकी सिआइएका पूर्वअधिकारी जोन केनेथले तिब्बत मुद्धामार्फत चीनलाई धुजाधुजा गराउने पात्रको पहिचान उहिल्यै गरिदिएर हामीलाई सहज बनाइदिएका छन् ।
- See more at: http://www.nepaljapan.com/2015/02/11/156431/#sthash.C736OFaj.dpuf
Posted by Sujit Mainali at 10:32 PM No comments: Links to this post